देउवाको एउटै निर्णयले भानुको खल्तीमा २५ करोड ! - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एउटै निर्णयले उनका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई २५ करोड हात लागेको छ । यद्यपि भानुलाई मोहरा बनाएर त्यसको भागबन्डा भने प्रधानमन्त्री देउवासम्म पुग्ने बताइन्छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत पीके जलविद्युत् आयोजनालाई स्वीकृत दिँदा देउवालाई २५ करोड हात लागेको हो ।
५ अर्ब १० करोड लागतमा सोलु, ओखलढुंगा र रामेछापको सिमानामा बन्ने ३० मेगावाटको सो जलविद्युत् आयोजना स्वीकृत गरेबापत भानुको भागमा ५ प्रतिशत सेयर हात लागेको स्रोतको दाबी छ । ५ अर्बको ५ प्रतिशत भनेको २५ करोड हो । ७३ प्रतिशत रसियनको लगानी रहेको उक्त आयोजना तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा लामो समयदेखि अड्किएर बसेको सो फाइल गत मंगलबार बेलुकी स्वीकृत भएको हो । बोर्डको अध्यक्ष उद्योगमन्त्री आफंै हुन्छ । अस्ति सोमबारसम्म पनि सो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवासँगै थियो । नयाँ मन्त्री आएपछि गर्छ कि गर्दैन भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले गत मंगलबार नै बोर्डको बैठक बोलाएर सो फाइल सदर गराएका थिए । जबकि, बोर्डमा अरू ४७ वटा फाइल अड्किएर बसेका थिए । बैठकमा मुख्यसचिवले अरू पनि फाइल छन् । हजुरभन्दा प्रधानमन्त्री देउवा झर्केका थिए । ‘खै त्यो पिकेको फाइल ?’ भन्दै आफैंले मुख्य सचिवलाई खोज्न लगाएर त्यासको मात्र सदर गरेर प्रधानमन्त्री हतार छ भन्दै बैठक कक्षबाट बाहिरिएको स्रोतले बतायो ।
बोर्ड सदस्यको हैसियतले बैठकमा सहभागी लगानी बोर्डका अध्यक्ष, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, घरेलु विभागका महानिर्देशक, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, सीएनआईका अध्यक्षसमेत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली देखेर छक्क परेका थिए । झन्डै पाँच महिनापछि बैठक बस्दा पनि त्यत्रा फाइलको वास्ता नगरी एउटा फाइल सदर गराउने प्रधानमन्त्रीको रवैयाको सदस्यहरू मूकदर्शक मात्र बनेको बताइन्छ ।
सुन तस्करीको जालोले बेरिँदै माओवादीको उच्च तह
काठमाडौं । सुन तस्करीमा संलग्न सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले माओवादी केन्द्रका माथिल्लो तहका नेताहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी गरेको रहस्य खुल्न पुगेको छ । भदौ १५ गते प्रहरीले दुई प्रमुख नाका केरुङ र तातोपानीबाट भित्रिएका २२ केजी सुनमध्ये १५ किलो सुन पौडेलको रहेको पत्ता लागेपछि सुन तस्करीमा माओवादी केन्द्रको माथिल्लो तहकै नेताहरूको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ ।
चालू अवस्थामा रहेको केरुङ र बन्द तातोपानी नाकाबाट समेत सुन भिœयाउन सफल पौडेललाई प्रहरीले खोज्न थालेपछि अहिले सम्पर्कविहीन भएका हुन् । गएको साउनमा भोटेकोसीको बाढीले अरनिको राजमार्गको लार्चा पुल भत्काएपछि गाउँपालिकामा अनुपस्थित रहेका प्रमुख पौडेल त्यसयता सम्पर्कविहीन छन् । उनी अहिले कहाँ छन् ? उनकै कार्यकर्ताहरूलाई समेत थाहा छैन । सुन तस्करीमा मुछिएपछि गाउँपालिकामा अनुपस्थित रहँदै आएका पौडेलले उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पालाई निमित्त दिएर हिँडेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएपछि माओवादी केन्द्रमा खुलेर लागेका पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई रिझाएर टिकट उम्काएको बताइन्छ । व्यापारिक पृष्ठभूमिका पौडेलले चुनावमा चाहिँदो खर्च गर्न सक्ने भएका कारण नै उनलाई टिकट दिइएको थियो । माओवादी केन्द्रमा खुलेर लाग्नुअघि भने उनी पहिला एमाले र पछि कांग्रेस बनेका थिए । पौडेलले टिकट पाउनुमा उनका भतिजा पर्ने माओवादी केन्द्रका नेता एवं दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक १ बाट उम्मेदवार बनेका सरल सहयात्रीको भूमिका रहेको बताइन्छ । अध्यक्ष दाहालसम्म पौडेललाई पु¥याउने काम सहयात्रीले गरेका थिए ।
दुईदुईपटक कन्टेनर व्यवसायी संघको अध्यक्ष बनिसकेका पौडेलले यसअघि तातोपानी नाका बन्द नहुँदा चिनियाँ सामानहरूको व्यापार गर्थे । उनले चीनको खासाबाट कपडादेखि अरू सामानहरूसमेत ल्याएर बेच्दै आएका थिए । तर, २०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएपछि खुलेको केरुङ नाकातिर उनले आफ्नो व्यापार सारेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा भने उनी सानातिना चिनियाँ सामानहरूको व्यापार गर्नेभन्दा सुनको तस्करका लागेका थिए । उनले संगठित गिरोह नै खडा गरेर सुन तस्करी गर्दै आएका थिए ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारभन्दा १ सय ४७ भोटले मात्र चुनाव जितेका पौडेलले चुनावको बेलामा करोडौं खर्च गरेको बताइन्छ । उनले करिब ४ करोड खर्च गरेको बताइन्छ । चुनावका बेला उनले तातोपानी क्षेत्रका व्यापारीहरूसँग बन्द तातोपानी नाका खुलाउन पहल गर्ने नारा ल्याएपछि ती व्यापारीहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै उनलाई मतसमेत दिएको बताइन्छ । त्यही आधारमा उनले चुनाव जितेका हुन् ।